Kooxda Arsenal oo heshay bedelka macalin Emery. – Xidigaha
Kooxda Arsenal ayaa xaalad xun soo wajahaday xili ciyaareedkaan kadib markii ay la kulantay guuldarooyin badan.
Waxaa macalin u ah kooxda Arsenal macalin Emery oo shaqada ka bedelay macalin Arsen Winger, Taageerayaasha Arsenal ayaa aad u farxay markii shaqa lagu wareejiyey macalinka hada xaaladu ku xun tahay.
Kooxda waxa ay hada qorsheeynee in iska dirto macalin Emery bedelne uga dhigto macalinkii laga raacdeeyey kooxda Tottenham Asbuucii horee ee Pochettino, waa dooqa koowaad u taagan qabashada macalinimo.
Macalin Pochettino ayaa lagu xamanaayey in qaban doono jaga macalinimo ee kooxda Bayer Munich oo laga raacdeeyey macalin Niko Kovac.
Arsenal kulankii ugu danbeeyey waxa ay gashay 2-2 Southampton taasi waxa ay meesha ka saartay in Emery sii ahaado macalinka kooxda, waxaa dhaliil joogta ah uga imaanee Taageerayaasha kooxda Arsenal.
Be the first to comment on "Kooxda Arsenal oo heshay bedelka macalin Emery."